Uhambo lwezinhlanzi, ichweba lase-Audierne - I-Airbnb
Uhambo lwezinhlanzi, ichweba lase-Audierne
Audierne, Bretagne, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jean
Ifulethi litholakala ngokushesha echwebeni elincane le-Audierne. Ukubuka okuhle kwezikebhe, i-marina nokudoba kusuka ekamelweni lakho kanye negumbi lokuhlala. Eduze kwezitolo, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlala ezizungeze itheku. Uzothola zonke izinsiza ngezinyawo. Uzoyithokozela le ndawo ngenxa yokukhanya, ukubuka, kanye nenkaba yedolobha.
Ohlangothini lolwandle, ulwandle lokuqala luqhele ngamamitha angama-700 kanti indawo yokudoba isiqhingi saseSein iyimizuzu emi-5 ngemoto.
Isikole sokuhamba ngomkhumbi, ukuntweza emanzini, i-Aquashow, i-kayaking, hamba ku-GR34 uye esicongweni se-Raz nohambo lwebhayisikili lezintaba. Ukuqasha izikebhe nezikebhe namabhayisikili.
Uhamba ogwini lwasendle, ehlathini, eduze neGoyen ukuze ufinyelele ePont-Croix, imikhosi yasendaweni: i-mouez ar gelted ePont-Croix ekuqaleni kuka-August, i-Beuzec Cap Sizun Heather Festival ngo-August, isuka eCornouailles Quimper ngoJulayi, July Brodeuses Pont. -L'Abbé, Ukuvakasha kwe-Moulin de Kériolet e-Beuzec Cap Sizun kunconywa ngokukhethekile.
Kodwa futhi imizuzu engu-20 ngemoto umnyuziyamu wasechwebeni waseDouarnenez, idolobhana elivamile laseLocronan. Ngefa elicebe kakhulu: amasonto, izindlu zesonto.Ohlangothini lolwandle, ulwandle lokuqala luqhele ngamamitha angama-700 kanti indawo yokudoba isiqhingi saseSein yimizuzu emi-5 ngemoto.
Isikole sokuhamba ngomkhumbi, ukuntweza, i-Aquashow, i-kayaking, hamba ku-GR34 uye esicongweni se-R
Kodwa futhi ichopho leRaz, ichopho leVan.
Izimakethe ngoMgqibelo ekuseni nangoLwesithathu ekuseni kanye nemakethe yabalimi ngoLwesibili kusihlwa ehlobo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Audierne namaphethelo